जनकपुर गणेश युवा कमिटीको उपाध्यक्षमा संजय र महासचिवमा बलराम निर्वाचित ! | अपन जनकपुर
जनकपुर गणेश युवा कमिटीको उपाध्यक्षमा संजय र महासचिवमा बलराम निर्वाचित !
विपिन कुमार यादव,जनकपुरधाम : जनकपुरधामको श्री गणेश युवा कमिटिको उपाध्यक्षमा संजय कुमार साह र महासचिवमा बलराम साह निर्वाचित भएका छन् ।
उपाध्यक्ष र महासचिव पदमा सहमती जुट्न नसक्दा चुनाव गर्नुपरेको बताइएको छ । चुनावको परिणाम अनुसार उपाध्यक्षमा संजय र महासचिवमा बलराम निर्वाचित भएका हुन् । वाँकी अध्यक्षसहित ९ पदमा यसअघि नै निर्विरोध चयन भइसकेको निर्वाचन अधिकृत दिपेन्द्र कुमार साहले जानकारी दिए ।
निषेधाज्ञाका कारण सहमतीको प्रयास गरिएपनि सम्भव नभएपछि सुरक्षा सर्तकताका साथ मनतान सम्पन्न गरिएको छ । मतदानमा कुल ३ सय ६६ मतदाता मध्ये २ सय २३ जनाले मतदान गरे । उपाध्यक्ष तर्फ विजयी भएका संजयले १ सय ७७ मत प्राप्त गरे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी संजय साह (पुरी)ले १ सय ४४ मत प्राप्त गरे ।
यस्तै महासचिवमा विजयी भएका बलरामले २ सय २ मत प्राप्त गरे भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भरत साहले १ सय १४ मत प्राप्त गरेका छन् ।
कमिटीको अध्यक्षमा सन्तोष कुमार महतो, सचिवमा संजिव साह र कोषाध्यक्षमा शुशान्त गुप्ता र छ सदस्य सहित नयाँ ११ सदस्सीय कार्यसमितिको टुङ्गो लागेको छ । सदस्यहरुमा रञ्जित कुमार यादव, सरोज कुमार भण्डारी, मनोज कुमार पुर्वे, श्रीराम साह, विश्वेश्वर महासेठ९रोशन० र हेमन्त कुमार महासेठ निर्विरोध चयन भएका छन् ।
उपाध्यक्षमा निर्वाचित संजय एसपी खवरका व्यवस्थापक र संवाददाता पनि हुन् ।
प्रकशित मिति : 2020-08-29